Abenzi beMveliso yeXabiso eliphantsi kunye neFektri, abaXhasi | Henghua
Imveliso yezolimo-Abavelisi base China, abaFektri, abaXhasi
Sihlala silandela umgaqo osisiseko "uMgangatho wokuqala, uPhakamileyo oPhezulu". Sizibophelele ngokupheleleyo ekuboneleleni abathengi bethu ngexabiso eliphantsi lokuthengisa ngentengiso, ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nenkxaso yobungcali kwiMveliso yezoLimo,Kk Spunbond engenziwanga, roll jumbo nonwoven, Ezolimo ezingezizo,ICambrela. Sinqwenela ukuthatha eli thuba ukuqinisekisa ubudlelane beshishini lwexesha elide kunye nabaxumi abavela kuwo wonke umhlaba. Imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njengeYurophu, iMelika, iOstreliya, iIran, iSweden, isiGrike, iSouth Korea. Ngoku sinentembelo ekuboneleleni ngenkonzo ebalaseleyo kunye nentengiso efanelekileyo. Sinethemba lokuba singasungula intsebenziswano yokuphumelela kwishishini kunye nawe kwixa elizayo!
Imakethi yeMbewu yezoLimo kulindeleke ukuba ikhule ngo ...
Imakethi yentengiso yezolimo kuMantla eMelika yohlalutyo ibandakanya icandelo lemveliso kunye nokuma komhlaba. ... Olu phononongo luchonga ...
Ukungenzi nzuzo kwendalo kuzuza iihektare ezili-1000 eSanta Barbara ...
Ekugqibeleni, uSmith uthe, eli ziko liza kuvelisa iimveliso ezinokuthengwa ngabantu njengendlela yokuxhasa ezolimo ezihlaziya. “Ekugqibeleni thina ...
Ulwazi lweNkampani kwezoLimo, uKwakha, kunye ...
... ezolimo, ulwakhiwo, kunye noomatshini bemigodi iqela lemveliso eneempawu ezili-1,500 + zenkampani ezibekwe ngokweemveliso ezingama-50.
Ukulondolozwa okuzinzileyo, intshukumo yeefama ukuya etafileni- ikamva lezolimo ...
Amaxabiso eMveliso yezoLimo aya ngokunyuka. Awuyi kuhlala
Amaxabiso ezinto zolimo ayaqhubeka njengoko ilizwe libuyela e ... naseParaguay- oko kuphakamisa ukuthengisa okuqinileyo kweemveliso zezolimo.
I-MSMEDA yase-Egypt, iSebe loMphathiswa Wezolimo lisayina i-MoU ukuxhasa ...
Umdlalo uthe intsebenziswano entsha noMphathiswa wezoLimo ... amaqela asebenzayo kunye nokufaka ilali enye, imodeli yemveliso enye.
Imveliso yezoLimo iiVidiyo ezihambelanayo ezivela kuYouTube
Sisoloko sikholelwa ekubeni iinkcukacha zigqiba umgangatho wemveliso yenkampani, kule nkalo, inkampani ihambelana neemfuno zethu kwaye iimpahla ziyahlangabezana nolindelo lwethu.
Umvelisi olungileyo, sisebenzisene kabini, umgangatho olungileyo kunye nesimo esihle senkonzo.
UAnna 2020.03.15 04:24:26
Ummeli wenkonzo yabathengi uchaze ngokubanzi, imeko yenkonzo intle kakhulu, impendulo ifike ngexesha elifanelekileyo kwaye ibanzi, unxibelelwano olonwabileyo! Sinethemba lokuba nethuba lokusebenzisana.
UPrisila NgoJanuwari 2019
Le yinkampani ethembekileyo nethembekileyo.
USally 2019.11.21 00:26:26
Le nkampani inokukhetha okuninzi okulungiselelwe ukuba ikhethwe kwaye inakho ukwenza inkqubo entsha ngokwesiko lethu, nto leyo intle kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zethu.
Non womluki Ilaphu Polypropylene
Uluhlu lwePolypropylene Ilaphu
Nonwoven Ilaphu Bag Roll
Nonwoven Ilaphu Bag
Yengubo For umatrasi
Isembozo seSofa esingamanzi
Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo, Ixabiso loLuhlu lweLaphu, Izinto ezingalukanga, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Non womluki Ilaphu, Kk Non womluki Ilaphu,